Paypal लागि Skrill वैकल्पिक? - मेरो मुद्रा बनाउने ब्लग
जुन 7, 2018 जुलाई 23, 2018 व्यवस्थापक0टिप्पणीहरू PayPal, skrill, skrill खाता, Skrill विचार
Skrill अनलाइन वालेट यो PayPal सँग तुलना गर्न सम्भव छ जो. तर Skrill तपाईंलाई पैसा सार्न र PayPal मार्फत छ कि छैन सम्भव जुवा साइटहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छन्. यो कदम र इमेल ठेगाना को तरिका पैसा प्राप्त गर्न सम्भव छ. Skrill मा खाता बनाउन पूर्ण निःशुल्क छ र तपाईं आदर्श मार्फत आफ्नो खातामा नगद जम्मा गर्न सक्षम, उदाहरण को रुपमा.
यो एक सुरक्षित छ, छिटो र धेरै सरल विधि व्यक्तिहरूलाई वा कम्पनीहरु पैसा पठाउन, र यसलाई आफ्नो Skrill खातामा पैसा प्राप्त गर्न पनि सम्भव छ. सँगै आफ्नो इमेल ठेगाना र पासवर्ड संग तपाईं लग इन गर्नुहोस् र तपाईं सुरु गर्न सक्षम हुनुहुन्छ. Skrill भन्दा छ 25 लाख ग्राहकहरु विश्वव्यापी र पछि अस्तित्व छ 2001 (शीर्षक Moneybookers हुँदा). यो भन्दा ठूलो मा Skrill भुक्तानी गर्न सम्भव छ 100,000 कारोबार. Skrill को विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ देखि अनुमोदित (आर्थिक आचरण प्राधिकरण)
तपाईं नियमित क्रेडिट कार्ड रूपमा पसलहरुमा भुक्तानी गर्न सक्षम छन् जो संग Skrill आफ्नो खाता मार्फत एक प्रिपेड मास्टरकार्ड सोध्न विकल्प पनि त्यहाँ. तर, त्यहाँ सधैं आफ्नो खाता मा पर्याप्त रकम हुनु पर्छ. Vinyl को यस्तो भव्य टुक्रा लागि मूल्यहरु छन् 10 एक वार्षिक आधारमा यूरो. Moneybookers मूल्यहरु तपाईं मार्फत नगद कमाउन 1 प्रतिशत (एक पुरा धेरै कम Paypal तुलना) र भन्दा कुनै प्रयोग 10 यूरो प्रत्येक व्यापार. ताकि तपाईं आफ्नो सेलफोन मा जो Skrill प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनुप्रयोग पनि त्यहाँ.
तपाईं एक निश्चित खेल साइटमा Skrill प्रयोग एक कदम सिर्जना गर्दा Skrill प्राय उत्कृष्ट सम्झौताहरू प्रदान गर्दछ. यी प्रस्तावहरू साइटमा र आफ्नो समाचारपत्र मार्फत उपलब्ध छन्. यस समयमा त्यहाँ जो तपाईं प्राप्त कार्य हो 10 निःशुल्क यूरो एकपटक तपाईंले Skrill एउटा खाता खोल्न. तपाईं उत्सुक हुनुहुन्छ र यदि तपाईं OneTime मा आशय भर ती यूरो rake एउटा माध्यम चाहनुहुन्छ, अब एक खाता बनाउन!
तपाईं चाँडै Skrill लकीर छ वर्तमान प्रतियोगिता सुरु हुन सक्छ र पनि टाढा दिन 30,000 पुरस्कार मा यूरो. एक Skrill खाता Possessing र यसलाई प्रयोग गरेर जुवा को क्षेत्र बाट आवश्यक छ & जब प्रतियोगिता तुलना सम्भावित लागत संग पैसा बरु कम छन्. एक Skrill खाता यस प्रकारको संग संभावना विशाल छन्. यो केवल एक ऋणदाता छ र एक bogus खाता अचाक्ली दण्डित छ देखि सबै जानकारी आफ्नो Skrill खाताहरू सही छ सुनिश्चित. तपाईं द्वारा ह्याक गर्न यो खाता आवश्यक छैन रूपमा एक शानदार पासवर्ड आवश्यक छ (मा) परिचितहरू.
सँगै Skrill संग अघिल्लो दस वर्ष भित्र मेरो व्यक्तिगत अनुभव अत्यन्तै अनुकूल छन् र म एउटा खाता स्वामित्व सबैलाई सल्लाह र पनि आफ्नो गतिविधि पृष्ठ जाँच्न. click here for more info
← MoneynoSurvey पैसा बचत सुझाव
Bitcoin कसरी काम गर्दछ? →